Askar Iyo Saraakiil Ku Dhaawacmay Shil Gaari Oo Kenya Ka Dhacay. – Calamada.com
Askar Iyo Saraakiil Ku Dhaawacmay Shil Gaari Oo Kenya Ka Dhacay.
calamada August 27, 2019 2 min read
Ugu yaraan inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa dhimatay, lix kalena waa ay dhaawacmeen ka dib markii ay isku dhaceen gaari ay la socdeen ciidamo Police-ka iyo Mooto waday dad rakaab ah oo marayey wadada u dhexeysa deegaanada Kiyaaniyaaga iyo Riwaambiti oo ka tirsan gobolka Kirinyaga ee dalka Kenya.
Labada ruux ee dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen rakaab la socday mootada, halka kuwa dhaawacmayna ay ahaayeen ciidamo ka tirsan Police-ka oo la socday gaariga shilka galay.
Shilka ka dib, dadka deegaanka oo careysan ayaa sameeyey dibad bax ka dhan ah Police-ka, iyagoo dab qabadsiiyey gaarigii ciidanka, waxayna darawalkii ciidanka ku eedeeyeen inuu si ula kac ah u laayey saaxiibadooda maadama uu si taxadar la’aan ah u kaxeynayey gaarig.
Ciidamada Police-ka ee ku dhaawacmay shilkaas ayaa la sheegay inay qabaan dhaawacyo halis ah islamarkaana qaarkood laga deyrinayo xaaladooda sida ay sheegeen saraakiisha Police-ka.
Saraakiisha ayaa badankood ka dhaawacmay madaxa, gacmaha iyo lugaha, waxaana la dhigay isbitaalka guud ee Kerugoya, halkaas oo laba ka mid ah lagu dhabiibay balse kuwa kale ayaa la sheegay inay xaaladoodu tahay mid halis ah.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in shilka uu yimid ka dib markii darawalkii kaxeynayey gaariga Police-ka uu ka baxay seedkii uu ku socday, islamarkaana uu ku dhacay mootada oo waday ugu yaraan saddex ruux.
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in laba ka mid ah rakaabkii la socday mootada ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray, halka midka kalena uu ka jabay id ka mid ah labada lugood, islamarkaana la dhigay isla isbitaalka la geeyey ciidamada Police-ka.
Previous: Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Xirtay Shirkad Isgaarsiineed.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 26-12-1440 Hijri.